umbuzo Prepar3D Help
iminyaka 2 iinyanga 2 ezidlulileyo #19 by Dariussssss
Ukuba ufumana iingxaki, iimpazamo okanye ukuba eminye imibuzo malunga Prepar3D Simulator, ziposele apha. Kwakhona zisixelela ntoni lebug kunye izisombululo zeengxaki ezahlukeneyo iimpazamo kule Simulator.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #64 by lmaselli
Okokuqala ndifuna Siyavuyisana nawe ngenxa umsebenzi omkhulu oyenzayo.
baqalisa Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo mna ndisebenzisa "P3D V3.4", wokuqala Umzekeliso efakiweyo yaba "kwiiBalearic Island" ndaze ndaqaphela sinengxaki ukuphakama somhlaba LEMH kunye nengxaki yendawo LESL.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #65 by Dariussssss
Molweni kwaye bamkelekile ukuba Forum yethu.
Siya kwenza konke okusemandleni ethu ukuze akuncede kulo mcimbi. Loo ezintle, ngaba elayishelwe uhlobo apha okanye kwenye indawo?
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #67 by lmaselli
Kuye elayishelwe kweli phepha. siqithi V2 kwiiBalearic.
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #77 by quietflyerBob
kwingxaki ezininzi ngomsebenzi wakho, ukuba 'sisixhobo omhle kakhulu kuthi! Ndiye ingxaki kunye add-on, umz Airbus A300 Multi lileqe ipakethe; Ndakhe kufakwa kuvimba wam Microsoft Fs, kwaye isebenza kakuhle kakhulu. Ngoku, mna w'd ndingathanda ukufaka iphekhi efanayo P3D leyo ibekwe Lwenkqubo efanayo Iifayile (x86) kakhulu, kodwa autoinstaller does'nt ukuvumela ukuba ukhethe P3D. Ngenye indlela, Ndiye efakiweyo nabanye abaninzi zoviwo ukusuka Rikooo kwi kokubini Sims; Yintoni ingxaki? Enkosi ngoncedo lwakho
iminyaka 2 ngenyanga 1 ago #81 by Dariussssss
Kwafuneka le Ncwadana moya FSX kwaye kakhulu elungileyo.
Mna akazazi inxalenye sobuchule P3D kodwa, oko kunokwenzeka ukuba ezinye uhlobo kungqubana nezi sims ezimbini. Ndikubonayo pics ukuba ukuba nina nobabini oluzakufakwa kwi ndawo enye ... akukho nto yinto embi ukuba zi ezifakwe ezahlukeneyo nzima drives, ukuba unako ukwenza ngaloo ndlela.
Ixesha ukwenza page: 2.461 imizuzwana